စီအန်အန် တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့လူကို ထရမ့်က လက်သီးနဲ့ထိုးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခု ထရမ့်က သူ့ တွစ်တာမှာ မနေ့က တင်လိုက်တယ်။ CNN ကို FNN (Fraud News Network) လို့လည်း နာမည်တပ်ထားတယ်။ ဒီဗီဒီယိုက ထရမ့် သမ္မတ မဖြစ်ခင်က WWE ပွဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ ဒါကို ထရမ့်က ပြန်တင်တာ။ တွစ်တာမှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်သွားသလို သူတို့ဆီက မီဒီယာသမားတွေ ကြားမှာလည်း ဟာကနဲ...ဟင်ကနဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တနေ့က ဘီဘီစီရဲ့ အင်တာဗျူးတခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတဦးက "လန်ဒန်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတောင် အဓိကရုဏ်းတွေ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရင် မီဒီယာတွေကို သွားလာခွင့်တွေ ပိတ်ရတယ်။ ကန့်သတ်ရတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေတော့ ရှိလာမှာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေက လုပ်ဆောင်နေသလို အတုယူကြတာမျိုးပါ" လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာကို ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတာဟာ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်သလိုမျိုး လိုက်လုပ်တာပါလို့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက ဆိုလိုချင်ဟန်တူပါတယ်။ ဒါဟာ သတင်းစာသမားဟောင်း ဦးဖေမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အာဘော် ဟုတ်/မဟုတ်ကတော့ မသေချာပါဘူး။ သေချာတာကတော့ လက်ရှိ မီဒီယာဖိနှိပ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကို "လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မှန်တယ်" လို့ ပြန်ကြားရေးက ယူဆထားတဲ့သဘောပါပဲ။
ထရမ့်က မီဒီယာကို ထိုးကြိတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို တင်လိုက်တော့ ဒီအတွက် "ဝမ်းနည်းရကြောင်း" ထုတ်ပြန်ချက် တခု စီအန်အန်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စီအန်အန်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် နောက်ဆုံး စာကြောင်းမှာ [We will keep doing our jobs. He should start doing his.] "ကျုပ်တို့အလုပ် ကျုပ်တို့ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ သူ (ထရမ့်) အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် စလုပ်သင့်ပြီ"လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီထုတ်ပြန်မှုကို သူတို့ဆီက နာမည်ကြီးမီဒီယာတွေက [CNN to Trump: Do Your Job] “ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပါ ဟု စီအန်အန်က ထရမ့်ကို တုန့်ပြန်” လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့ တန်ပြန်ဖော်ပြကြပါတယ်။ စီအန်အန်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ သတင်းရေးသားချက်တွေထဲမှာ သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ဒီအပြုအမူကို [Juvenile Behavior] “ကလေးဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်” ဖြစ်တယ်လို့လည်း တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်းကို တခြားမီဒီယာတိုက်တွေကလည်း ထင်ရှားအောင် ထပ်မံဖော်ပြကြပါတယ်။
ထရမ့်ဟာ FOX, CNN, Washington Post စတဲ့ မီဒီယာတွေကို သူ သမ္မတဖြစ်တဲ့နေ့ကတည်းက ဒီနေ့ထိ တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်အနေနဲ့ သမ္မတကျမ်းသစ္စာကြိမ်ဆိုတဲ့နေ့က ထရမ့်ဆန့်ကျင်သူတွေ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ကြားထဲ သတင်းယူနေတဲ့ သတင်းထောက် (၂) ယောက်ကို ဆူပူလှုံ့ဆော်မှုပုဒ်မတပ်ပြီး အသစ်စက်စက် အစိုးရက တရားစွဲဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အစိုးရတွေ မီဒီယာတွေကို နှိပ်စက်တာမှာ အဆိုးရွားဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ အယ်ဂျာဇီးယားက သတင်းထောက် သုံးယောက်ကို အီဂျစ်မှာ ထောင်ချတုန်းက ကမ္ဘာတဝန်းလုံးက မီဒီယာတွေ စုစည်းပြီး အသံတိတ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖူးတယ်။ ခုနောက်ဆုံး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတခုကို ပြပါဆိုရင်တော့ မက္ကဆီကိုမှာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းသတင်းစာသမားတဦး သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက် သတင်းထောက်တွေ မြို့လယ်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။
သတင်းထောက်တွေက အစိုးရကို တန်ပြန်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စကို ပြောပါဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းက အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းထောက်နှစ်ယောက်က အစိုးရကို (အထူးသဖြင့် ထရမ့်ကို) တရားစွဲတဲ့အမှု တခု ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စမှာကတော့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ အိုဘားမားလက်ထက်ကတည်းက ဒီသတင်းထောက်တွေကို ‘kill list’ ထည့်ထားပြီး ခု ထရမ့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီစာရင်းကို မဖျက်သေးတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုး အစိုးရကို ပြန်ပြီး တရားစွဲရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အမေရိကန် စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာ “သတင်းထောက်တွေ ထရမ့်အစိုးရကို ဆန္ဒပြသင့်သလား” ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အရေးတကြီးဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သတင်းဌာနအများစုဟာ ထရမ့်အစိုးရရဲ့ ပျော့ကွက်၊ ဟာကွက်တွေကို ပြောင်မြောင်လှတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရေးသားတင်ဆက်နေခဲ့ကြတာ ဒီနေ့ထိပါပဲ။
နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းဌာနနဲ့ တခြားသြဇာရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေ အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ခံရတုန်းကတော့ လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာကို မဖိနှိပ်ရေး ဆိုပြီး ပြည်သူလူထုက သတင်းစာတွေအတွက် ရပ်တည်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချရရင် သတင်းစာသမားတွေဟာ ကိုယ့်အပေါ် ဖိနှိပ်မှုကို တုန့်ပြန်တဲ့နေရာမှာ အစိုးရရဲ့ အလွဲအမှားတွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကို သတင်းရေးသားခြင်း၊ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ ဒီအစိုးရရဲ့ အားနည်းကွက်၊ ပျော့ကွက်တွေကို တစုတစည်းတည်း ပြန်လည် ဖော်ပြကြ၊ တုန့်ပြန်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါဟာတင် စီအန်အန်က ပြောတဲ့ “ကျုပ်တို့အလုပ် ကျုပ်တို့ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် စလုပ်သင့်ပြီ" လို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ၊ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် တုန့်ပြန်တာပဲလို့ မှတ်ယူမိပါတယ်။
Previous Post သတင်းထောက် တယောက် သေဆုံးခြင်း
Next Post စစ်မြေပြင်သွား ဆောင်းပါး နှစ်ခု လေ့လာချက်